ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ဂျေ Tkach ကနေန်ထမ်းပေးစာ > ကို MB 2017 ဇန်နဝါရီ
Bitte bedenken auch Sie, dass Menschen, die bisher nicht zum Glauben an Christus berufen wurden, die Wahrheit vor ihren Augen nicht sehen können. Aufgrund des Sündenfalls sind sie geistlich blind (2. ကောရိန္သု 4,3-4). Aber genau zur rechten Zeit öffnet der Heilige Geist ihre geistlichen Augen, damit sie sehen können (Epheser 1,18). Die Kirchenväter nannten dieses Geschehen das Wunder der Erleuchtung. Wenn es geschah, war es möglich, dass Menschen zum Glauben kamen; glauben konnten, was sie nun mit eigenen Augen sahen.
အချို့လူများသည်မျက်စိမမြင်သော်လည်းမယုံရန်ရွေးချယ်ကြသော်လည်း၊ သူတို့အများစုသည်သူတို့၏ဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်ဘုရားသခင့်ရှင်းလင်းသောတောင်းဆိုချက်ကိုအပြုသဘောဖြင့်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ဘုရားသခင်အားသိကျွမ်းခြင်း၏ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် ၀ မ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားရရန်နှင့်ဤအချိန်ကာလအတွင်းအခြားသူများအားဘုရားသခင်အကြောင်းပြောပြနိုင်ရန်အတွက်သင်မကြာမီပြုလုပ်ရန်စောစီးစွာဆုတောင်းပါ။
မယုံကြည်သူများသည်ဘုရားသခင်နှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်များရှိသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ဤအယူအဆအချို့သည်ခရစ်ယာန်များထံမှမကောင်းသောပုံသက်သေများ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများမှာမူနှစ်ပေါင်းများစွာကြားခဲ့ဖူးသောဘုရားသခင်အကြောင်းယုတ္တိမတန်သော၊ ဤအယူအဆမှားများသည်ဝိညာဉ်ရေးမျက်စိကွယ်မှုကို ပို၍ ဆိုးစေသည်။ သူတို့မယုံတာကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ များစွာသောခရစ်ယာန်များသည်နံရံများကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်းဆန်ခြင်းအားဖြင့်တုံ့ပြန်ကြသည်။ ဤနံရံများကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်မယုံကြည်သူများသည်ယုံကြည်သူများကဲ့သို့ဘုရားသခင်အတွက်အရေးကြီးသည်ဟူသောအမှန်တရားကိုသတိမမူမိကြပါ။ ဘုရားသခင့်သားတော်သည်ယုံကြည်သူများအတွက်သာမကကမ္ဘာမြေသို့ကြွလာသည်ကိုသူတို့မေ့သွားကြသည်။
သခင်ယေရှုသည်ယုံကြည်သူမဟုတ်သူများကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်တို့အားဝေငှပေးသည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုချစ်မြတ်နိုးတော်မူသောအရှင်ကိုမသိသေးသော်လည်းဘုရားသခင်ကသူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းပြီးရွေးနုတ်တော်မူမည့်ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ဤရှုထောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားပါကမယုံကြည်သူအပေါ်ထားရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားနှင့်အပြုအမူများပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ သူတို့မိဘတွေကိုမိဘတွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြီးသူတို့ရဲ့ဖခင်စစ်စစ်ကိုမသိသေးတဲ့မိသားစု ၀ င်တွေအနေနဲ့လက်ခံလိမ့်မယ်။ သူတို့သည်ခရစ်တော်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်နွှယ်နေသည်ကိုမသိသောပျောက်ဆုံးနေသောညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်သူမဟုတ်သူများနှင့်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တွေ့ဆုံရန်သူတို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာသူတို့သည်လည်းသူတို့ဘဝအသက်တာ၌ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်။